Huru Dhata, Basa Rakanaka: MaSMB Anogona Kuvandudza Transparent Marketing Maitiro | Martech Zone
Mutengi data yakakosha kumabhizinesi madiki uye epakati (SMBs) kuti unzwisise zviri nani zvinodiwa nevatengi uye mabatiro avanoita nemhando. Munyika ine makwikwi zvakanyanya, mabhizinesi anogona kumira pachena nekusimudzira data kugadzira zvakanyanya zvine chekuita, zviitiko zvemunhu kune vatengi vavo.
Nheyo yeanobudirira mutengi data zano kuvimba nevatengi. Uye netarisiro iri kukura yekushambadzira kwakajeka kubva kune vatengi nevanodzora, hapana nguva iri nani yekutarisa mashandisiro aunoita data revatengi uye maitiro ekuvandudza maitiro ekushambadzira anokudziridza kuvimbika uye kuvimba nevatengi.
Mitemo iri kutyaira zvakanyanya hutsinye mitemo yekudzivirira data
Nyika dzakaita seCalifornia, Colorado, neVirginia vakaisa yavo yekuvanzika marongero ekuti mabhizinesi anogona sei kuunganidza nekushandisa data revatengi. Kunze kweUS, China's Personal Information Protection Law uye EU's General Data Dziviriro Regulation zvese zvinoisa zvirambidzo pamagadzirirwo edata revagari.
Pamusoro pezvo, vatambi vakuru vetekinoroji vakazivisa shanduko kune yavo yekutevera data maitiro. Mumakore maviri anotevera, yechitatu-bato makuki ichave isingachashandi pa Google Chrome, danho rinotevera mamwe mabhurawuza akaita seSafari neFirefox akatotanga kuvharira echitatu-bato rekutevera makuki. apuro yatangawo kuisa zvirambidzo pane yako data yakaunganidzwa mumaapps.
Zvinotarisirwa nevatengi zviri kushanduka zvakare.
76% yevatengi vanoti kana kunetseka zvakanyanya nezvekuti makambani anounganidza nekushandisa sei data ravo. Zvakare, 59% yevatengi vanoti vangangosiya zviitiko zvemunhu (semuenzaniso, kushambadza, kurudziro, nezvimwewo) pane kuita kuti chiitiko chavo chedhijitari chitevedzerwe nemhando.
Gartner, Yakavanzika Yedata Maitiro Akanakisisa: Maitiro eKubvunza Vatengi Ruzivo Panguva Yedenda
Mune ramangwana, tinogona kutarisira zvimwe zvirambidzo kuchengetedza data rako pachako. Izvi zvinhu zvinonongedza kudikanwa kwekuongorora zvakare maitiro ekushambadzira kuti ave nechokwadi chekuti ari kuenderana nemitemo yehurumende asiwo anoratidza shanduko yeindasitiri uye zvinotarisirwa nevatengi.
Nhau dzakanaka ndedzekuti kuchengetedza data mutengi yatove yekutanga bhizinesi kune akawanda maSMB.
55% yemaSMB akaongororwa muUS chiyero che data uye ruzivo rwekuchengetedza tekinoroji seyakakosha pakuita kwavo bhizinesi, zvichiratidza kunetseka kuchengetedza data revatengi. (Ona pazasi pepeji yenzira yekuongorora.)
Bhizinesi rako riri kutaurirana sei maitiro ako edatha kune vatengi? Muchikamu chino chinotevera, tichabata maitiro akanakisa ekushambadzira pachena ayo anobatsira kusimbisa hukama hwevatengi kuburikidza nekuvimba.
Zvishandiso uye mazano ekuvandudza maitiro ekushambadzira akajeka
Heano matanho mashoma evashambadziri anogona kutora uye maturusi ekushandisa anogona kubatsira kuvandudza pachena kushambadzira maitiro.
Ipa vatengi kutonga kwakawanda - Chekutanga uye chepamusoro, zvakakosha kupa vatengi kuchinjika pamusoro pekuti data ravo riri kuunganidzwa uye kushandiswa sei. Izvi zvinosanganisira kupa sarudzo dzekubuda uye dzekubuda dzevatengi vanogovana data ravo. Lead chizvarwa software inogona kuve chishandiso chinobatsira nekukubvumidza iwe kugadzira webhusaiti mafomu anounganidza zviri pachena data revatengi.
Taura zvakajeka kuti data revatengi rinodzivirirwa sei -Iva pachena nezve matorero auri kuita uye kushandisa data revatengi. Tsanangura kune vatengi zviito zvauri kutora kuchengetedza data ravo kana kana paine shanduko iri kuitwa pakuchengetedzwa kwairi. Iwe unogona kuita izvi nekushandisa ese-mu-imwe yekushambadzira chishandiso kuronga meseji nezve mutengi kuchengetedzwa kwedata uye kushandiswa mumatanho akawanda ekusvika.
Ipa kukosha chaiko mukutsinhana nedata -Vatengi vanoti vanonyengerwa nemubairo wemari mukutsinhana nedata ravo. Funga kupa bhenefiti inobatika kune vatengi mukutsinhana nedata ravo. Survey software inzira yakanaka yekubvunza zvakajeka uye kuunganidza data mukutsinhana nemubairo wemari.
53% yevatengi vanoda kugovera data ravo pachavo mukutsinhanisa mibairo yemari uye 42% yezvigadzirwa zvemahara kana masevhisi, zvichiteerana. Vamwe 34% vanoti vaizogovana data ravo pachavo mukutsinhana nemitengo kana makuponi.
Iva anoteerera -Kubvuma zvikumbiro zvevatengi kana zvinonetsa nekukurumidza uye pachena zvichabatsira kuvaka kuvimba, nhanho yakakosha yechiitiko chakanaka chevatengi. Zvishandiso zvinopa kushambadzira otomatiki, personalization, social media, email, uye chat mabasa anogona kubatsira bhizinesi rako nemazvo uye nguva dzose kupindura kune vatengi.
Bvunza mhinduro - Mhinduro chipo! Ongorora kuti matekiniki ako ekushambadzira ari kuita sei nekuenda zvakananga kune sosi-vatengi vako. Kuunganidza mhinduro dzenguva dzose kunobvumira mapoka ekutengesa kugadzirisa mazano sezvinodiwa. Chishandiso chekutsvaga chemusika chinogona kukubatsira kuunganidza uye kuongorora data paunenge uchiongorora vatengi vako.
Ita shuwa kuti une hurongwa hwetekinoroji yako
Sezvandakagovera pamusoro, kune nzira dzakawanda dzekushandisa maturusi ekutsigira pachena maitiro ekushambadzira, asi kungoita tekinoroji hakuna kukwana. In GetApp's 2021 Marketing Trends Survey:
41% yevanotanga vanoti havasati vagadzira chirongwa chehunyanzvi hwavo hwekushambadzira. Zvakare, kutanga kusina hurongwa hwekushambadzira tekinoroji kanopfuura kana kana mukana wekutaura tekinoroji yavo yekushambadzira haizadzise zvinangwa zvebhizinesi ravo.
Bhizinesi rako rinogona kufarira kana parizvino kushandisa akati wandei esoftware kuunganidza data uye kutaurirana maitiro edatha nevatengi. Kuita zvakanyanya tekinoroji uye kuve nechokwadi chekushanda kwayo, zvakakosha kugadzira a chirongwa chehunyanzvi hwekushambadzira woitevera.
Kana zvasvika pakushambadzira kwechokwadi uye kwakajeka, pane zvakawanda zviri panjodzi — kuvimbika, kuvimba nevatengi, uye kuvimbika. Aya matipi inzvimbo yekutanga kugadzirira shanduko yemamiriro ekuchengetedza data uchisimbisa hukama nevatengi.
kushanya GetApp yekuongorora kwesoftware uye ruzivo rwenyanzvi kuti ikubatsire kuita sarudzo dzine ruzivo.
GetApp's 2021 Top Technology Trends Survey yakaitwa kubva Nyamavhuvhu kusvika Gunyana 2021, pakati pe548 vakapindura mhiri kweUS, kuona zvinodiwa tekinoroji, matambudziko, uye maitiro emabhizinesi madiki. Vakapindura vaifanirwa kuve nechekuita mukutenga sarudzo dzehunyanzvi kumakambani ane vashandi 2 kusvika mazana mashanu uye kubata chinzvimbo chemaneja kana pamusoro mukambani.
GetApp's Marketing Trends Survey yakaitwa muna Kubvumbi 2021 pakati pe455 US-based vakapindura kuti vadzidze zvakawanda nezvekushambadzira uye tekinoroji maitiro. Vakapindura vakaongororwa mabasa ekuita sarudzo mukutengesa, kushambadzira, kana basa revatengi kumakambani ane vashandi 2 kusvika mazana maviri nemakumi mashanu.
Tags: mhinduro yemutengikuvanzika kwevatengitsvakurudzo yevatengimutengi kuvimbadata yemutengikuchengetedzwa kwedata revatengimhinduro yemutengiDatadata protectiongartnergarner datatsvakurudzo yegartnergetappgoogle Chromechirongwa chehunyanzvi hwekushambadzirakushambadzira maitiromarketing trends surveydata rako pachakozviitiko zvemunhupiikutevera vatengi online
Meghan Bazaman muongorori mukuru pa GetApp, kugovana ruzivo nezve tekinoroji yekushambadzira uye software iri kubuda. Akadzidza Advertising paYunivhesiti yeTexas kuAustin uye ane ruzivo rwekuvhara tech, media, hutano hwehutano uye ecommerce kubvira 2011. Asati ajoina. GetApp, Meghan akakwanisa zvidzidzo zvekutsvaga zvekushambadzira uye akatungamira zvirongwa zvekushambadzira zve data inotungamira, ruzivo uye kambani yekubvunza. Ane hunyanzvi hwekuita tsvakiridzo yeongororo, kugadzira data kuona, uye kupa ruzivo rwakanyanya kune vanobatana.
Queue-it: Wedzera Imba yekumirira Yechokwadi kune Yako Webhusaiti Kugadzirisa Yakakwira Traffic Surges